Wararka Maanta: Axad, Aug 12, 2012-Danjire Augustine Mahiga oo Madaxda DKMG iyo Murashaxiinta kale ku eedeeyay inay Musuqayaan Xulista Baarlamaanka
Danijre Mahiga ayaa sheegay in xubnahaas tallaabo laga qaadi doono markii lagu helo eedaha loo jeedinayay, wuxuuna xusay inay mudan doonaan in cunno-qabteyn lagu soo rogo.
"Kuwa musuqmaasuqa wada waa dadka rajada ka qaba ee u ololeynaya boosaska cusub ee baarlamaanka iyo sidoo kale kuwa rajada ka qaba xilalka madaxweynaha iyo afhayeenka baarlamaanka, waxaana ka mid ah dadka horay jagooyinka u hayay hadday ahaan lahaayeen kuwa horay u hayay jagooyinka baarlamaanka ama kuwa dowladda iyo kuwo dibadda ka ah," ayuu dajire Mahiga oo la hadlayay BBC-da.
Sidoo kale, wuxuu sheegay in musuqmaasuqa ay qayb ka noqon karaan odayaasha dhaqanka ee loo xilsaaray soo xulista xidlhibaannada baarlamaanka cusub ee dalka Soomalaiya, isagoo sheegay in musuqmaasuqu uu isugu jiro mid wax bixin ah iyo wax qaadasho ah.
Dajire Mahiga ayaa waxaa la weydiiyay caddeymaha ay u hayaan eedeymaha ay u jeedinayaan xubnaha uu tilmaamay isagoo kaga jawaabay: "Hubaashii waqtigan kama jiro gudaha Soomaaliya guddi doorasho ama hay'ad sharci oo shaqeynaysay, laakiin waxaa jiri doonta in lasoo ururiyo caddeymaha, ma jiraan wax la isku cafin doono."
Ugu dambeyn, Dajire Mahiga wuxuu sheegay in shaqsiyaadka noocaas ah ay mudan doonaan cunno-qabteyn; isagoo carrabka ku adkeeyay inaan laga daali doonin in lasoo helo caddeymo ku filan eedeymaha ay jeedinayaan.
Hadalkan Mahiga ayaa wuxuu imaanayaa iyadoo ururka Midowga Afrika, Qaramada Midoobay iyo urur goboleedka IGAD ay soo saareen Jimcihii lasoo dhaafay qoraal ay ku sheegeen in tallaabo laga qaadi doono shaqsiyaadka musuqmaasuqa ku haya xulista baarlamaanka Soomaaliya.